किन बढ्दैछन् महिला हिंसाका घटना ? – Radio Hatemalo FM
किन बढ्दैछन् महिला हिंसाका घटना ?
प्रकाशित मितिः २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०१:५६ March 11, 2018 हातेमालो संवाददाता
हुन त महिला भएर महिलाकै समस्याको विषयमा वकालत गर्नु तपाईहरुको लागि अवाञ्छित होला । तैपनि आजको समय विश्वव्यापी सन्दर्भलाई अनुकुल बनाउन महिला माथि हुने गरेका ज्यादतीयुक्त अराजक कार्यहरु भित्रको एकपाटो दिनानुदिन बढ्दै गएको बलात्कारका घटना आजको मौलाउदो विषयमा यहाँ कोट्याउने प्रयत्नरत छु ।
जगतले काँचुली फेरेको यो २१औ शताव्दीमा आईपुग्दा पनि हाम्रा नेपाली छोरी चेली पनि आफ्नो जन्म घर भनौ वा कर्म घरमानै असुरक्षित छन् । दूधमुखे बालिका र डाँडापारीका जुन बनेका आमा पनि कति बेला के हुने हो ?, कति बेला कस्ले के गर्ने हो ? भन्ने मानसिक पीडामा त्रासिद मुद्रामा बस्न बाध्य रहेका छन् । न यहाँ जन्म दिने पिता न त दाजु भाई, काका मामा न त बाँकी नै रहे सहपाठी मित्र ।
दिनदहाडै इच्छाविपरित जवर्जस्ती सामूहिक रुपमा बलात्कार गर्न पछि पनि परेनन् बलात्कार पछि निर्ममतापूर्वक हत्या गर्न । के तपाई यो सूझप्रति विश्वास गर्नुहुन्न ? हालैमात्र विचिन्न सञ्चारमाध्यमबाट हामीले थाह पायौँ– दाजुले बहिनीलाई बलात्कार गरी हत्या गरे । पूर्वी झापामा दुई वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भयो । यहि फागुन १५ गते विराटनगरमा १५ वर्षकी किशोरीमाथि ५ जनाले सामूहिक बलात्कार गरे । यसैगरी नेपालगन्जमा पनि किशोरीमाथि पटक पटक बलात्कार भएका घटना सार्वजनिक भईरहेका छन् ।
हाम्रो मानसपटलमा यस्ता खालका कर्तूत कूकार्यले के असर पारिरहेको छ यो गम्भीर सोचनिय विषय बनेको छ । यी घटनाबाट स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न, पढ्न, लेख्न एवम् राज्यद्वारा प्रदान गरिएको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न वा अधिकार लिनबाट बञ्चित हुँदैछन् । कहाँ छ नेपालमा महिला हितका लागि बनाईएको कानून दस्तावेज ? कहाँ कुन विषयमा वहस गर्दैछन् महिला अधिकारकर्मी? किन कानूनले कार्यान्वयनको सुमार्ग देखाउदैन । पद र प्रतिष्ठाको सम्मान मात्र खोज्नेहरुको अगाडि आज अवोध बालिकाहरु आफन्तदेखि नै असुरक्षित हुँदै मृत्युको मुखमा छटपटाईरहेका छन् ।
देश चलाउनेहरु, कानून बनाउनेहरु, वकालत गर्ने, न्याय दिने र सुरक्षा दिनेहरुको यो लचिलो नाजुक स्थितिले आज नेपाली छोरीहरुको अस्तित्वमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । अबका दिनमा सम्वन्धित सरोकारवाला निकायले गम्भीरताका साथ बलात्कारका घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई कानून वमोजिम कार्वाही गर्न जरुरी छ। यदि पीडितको उजुरी लिने तर पीडिकलाई उन्मुक्ति दिने न्याय भयो भने समाजमा यस्ता दर्दनाक घटना घटाउनेहरुले प्रोत्साहन पाउने छन् त्यसैले दोषीलाई कार्वाही गर्न जरुरी छ । तव मात्र नारी दिवस मनाउनुको अर्थ रहन्छ । अन्यथा नारी दिवस मनाईरहने महिलाहरु हिंसाको शिकार भईरहने छन् । ‘‘जहाँ नारीको पूजा र सम्मान हुन्छ, त्यहाँ इश्वरको पनि वास हुन्छ ’’भन्ने धर्म गुरु स्वामी विवेकानन्दको भनाईलाई जस्ले आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्छ, तवमात्र मानवताको पहिचान देखिन्छ ।
Posted in मुख्य समाचार, विचार, समाज
आइतबारदेखि चार दिन देशका विभिन्न भेगमा भीषण वर्षा हुने
नरैनापुरमा घुम्ती शिविर हुने
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीको टुंगो अर्को वर्ष
राधालाई निर्मम कुट्ने पार्वती प्रक्राउ, मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि नेकपा एमालेले छानबिन थाल्यो ।